dilip munankarmi(dilip munankarmi) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
दिलिप मुंनकर्मीको लगानीकर्तालाई सुझाव: कित्ता जोगाए आज हारेको लडाई भोलि जितिन्छ !
बजारले आजभोलि भन्दा भन्दै सबैलाई कठीन अवस्थामा पुर्याएको छ । लगानीकर्ताको पकड र उल्लेख्य लगानी नरहेको हाम्रो पूँजीबजारको बियरिस अवस्थालाई नकार्नु गलत हुनेछ । यस अवस्थामा के गर्ने, के नगर्ने व्यक्तिगत मात्र होईन, संस्थागत र बजारका लागि नै भनेर भित्र्याईएका संस्थाहरू पनि दिविधामा देखिएका छन् । जसले जे भने पनि कित्ताको खेलमा सबैभन्दा...
लगानीकर्तालाई निराश बनायो ओम डेभलपमेन्ट बैंकले, व्यवसाय बिस्तारमा ध्यान नदिंदा नाफा स्थिर
काठमाण्डौ । ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा खासै कमाल देखाउन सकेन । यो बैंकले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा नाफामा झिनो मात्र प्रगति गर्न सकेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बैंकको खूद नाफा २६ करोड ५७ लाख रहेकोमा यो वर्ष २६ करोड ६२ लाख मात्र भएको हो । यो हिसाबले नाफामा ५ लाख रुपैयाँको मात्र वृद्धि गर्न...
सेयर शिक्षा ४ : घट्दो बजारमा यसरी गरौं लगानीको संरक्षण
►दिलिप मुंनकर्मी प्रतिफलका लागि लगानी, लगानीमा जोखिम र जोखिम र प्रतिफल बीच जकडिएको लगानी निर्णयमा कसरी समाञ्जस्यता कायम गर्ने ? कुन समयमा, कसरी र कहाँ लगानी गर्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ ? जोखिम कति लिने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? लगानीकर्ताका सबैभन्दा जटिल प्रश्नहरु यिनै हुन् । बजार घटेको वा घट्ने क्रममा रहँदा...
सेयर शिक्षा ३ : यसरी गरौं सानो बचतलाई लगानीमा रुपान्तरण
►दिलिप मुंनकर्मी हामी नेपालीको एउटा परम्परा भनेको बचतको बानी पनि हो । परम्परागत रुपमै पनि भविष्यको लागि साँच्नु पर्छ भनेर खाना पकाउन चामल वा पिठो झिक्दा समेत लक्ष्मी भाग भन्दै पुनः भकारी वा भाँडोमा नै फिर्ता गर्ने चलन छ । यसले आज थोरै कम उपभोग गरेर भए पनि भोलिका लागि बचाउनु पर्दछ भन्ने व्यवहारिक शिक्षा नै बचत सिर्जना हो । बचत सिर्जना बचत...
सेयर शिक्षा २ : यस्ता छन् बैंक तथा बित्तीय संस्थामा लगानी गर्नुअघि ध्यान दिनैपर्ने ७ पक्ष
►दिलिपकुमार मुंनकर्मी बैंक तथा वित्तिय संस्थाअन्तर्गत (क) बाणिज्य बैंक, ख) विकास बैंक, ग) वित्तीय संस्था(फाइनान्स कम्पनी) र घ) लघुवित्त गरी चार प्रकारका संस्थाहरु स्वीकृत तथा संचालनमा रहेका छन् । हाल २८ वाणिज्य बैंकहरु, ४० विकास बैंकहरु, २८ वित्तीय संस्थाहरु र ५३ लघुवित्तहरु नेपाल राष्ट्रबैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त गरी संचालनमा छन् ।...
सेयर शिक्षा १ : सोझा लगानीकर्ता यसरी फस्छन् ‘बुल ट्रयाप’मा, यस्तो छ बच्ने उपाय
►दिलिपकुमार मुनंकर्मी शेयरमा लगानीको मुख्य लोभ भनेको लाभांश र पुँजीगत लाभ नै हो । कारोबारी वा छोटो समयको लगानी गर्नेलाई पुँजीगत लाभको लोभ हुन्छ भने दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरु भने लाभांशसँगै पुँजीगत लाभको लोभमा शेयर किन्दछन् । त्यो भनेको लगानीकर्ता र कारोबारीले लगानी वा कारोवार बापत खोजेको वा अपेक्षित प्रतिफल अर्थात मुनाफा नै हो...